Nabi Ibraahiim C.S. - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Nabi Ibraahiim)
Coordinates: 31°31′29″N 35°06′39″E﻿ / ﻿31.524744°N 35.110726°E﻿ / 31.524744; 35.110726
Nabi Ibraahiim C.S ama Nebi Ibraahim Khaliifu Allah (Af-Laatiin: Abraham Af-Hebrow: אַבְרָהָם Af Amxaari : አብርሃም Af carabi: ﻧﺒﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ; "nebi ibraahim"; loo yaqaano "Khaliifu Allah" oo ah "saaxiibkii Alle") waa nebi iyo rasuul ka mid ah anbiyada iyo rususha Ilaahay u soo diray dadka. Nebi Ibraahim wuxuu ahaa saaxiibkii Eebbe (s.w), waana mid ka mida shanta Rusul ee lagu sheegay kitaabka Quraan kariimka ah.
Nebi Ibraahin waxaa loo soo direy dad caabuda xidigaha, sanabyada iyo khuraafaadka, wuxuuna dadkiisii ugu yeeri jirey iney Eebbe keligiis caabudaan, hase ahaatee wey beeniyeen. Waxayna isku dayeen iney gubaan, Eebbe ayaana ka badbaadiyey. Si kastaba ha ahaato, Eebe (subxaanahu wa tacaalaa) wuxuu siiyay caruur badan oo qaarkood laga dhigay nebiyo iyo rasuul, waxaana ka mid ah wiilashaasii Nebi Ismaaciil iyo Nebi Isxaaq. Intaasi waxaa dheer, Ilaahay wuxuu barakeeyay oo aad u badiyay tafiirta Nebi Ibraahim; tafiirtiisa waxaa ka mid ah bulshooyinka Carabta iyo Yuhuuda maanta ku dhaqan wadano badan oo Bariga Dhexe ah. Dhinaca kale, Nebi Ibraahim iyo wiilkiisii Nebi Ismaaciil ooy caawinayaan tiro malaa'ig ah waxay si wada jir ah u dhiseen Kacbada, waana aasaaska magaalada Makka ee deegaanka Xijaas ee dhulka Carabiya. Nebi Ibraahim wuxuu Alle (s.w) ku soo dejiyay Kitaabka Suxufiga ee Nabi Ibraahim.
1 Suxufi Ibraahim
2 Nebiyada iyo Rasuusha
Suxufi Ibraahim Kitaabka Suxufiga ee Nabi Ibraahim (Af Ingiriis : Scrolls of Abraham; Af carabi: ﺻﺤﻒ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, "suxufi ibraahim", ﮐﺘﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, "kitaab ibrahim"; Af Soomaali : qoraaladii Nebi Ibraahim ) waa kitaab diini ah oo Ilaahay (koreeyee) ku soo dejiyay Nebi Ibraahim. Qoraaladaasi waxaa khubarada diinta Islaamku u aqoonsan tahay ineey yihiin waxyigii Alle ku soo dejiyay Nebi Ibraahim; kuwaasi oo uu qoray Nebi Ibraahim naftiisa iyo isku duba rideen intii raacsanayd asaga ka dib markii uu geeriyooday.
Nebiyada iyo RasuushaEdit
Wuxuu ku qoran yahay luuqada reer bani Israa'iil, iyo farta Hebrowga.
Wuxuu aasaas u yahay diinta Yuhuuda ama Hebrowga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabi_Ibraahiim_C.S.&oldid=166507"
Last edited on 16 Febraayo 2017, at 12:11
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Febraayo 2017, marka ee eheed 12:11.